Sidee looga dhaqaajiyaa habka keydinta batteriga ee Android maxaa loogu talagalay? Androidsis
Haaruun Rivas | | Tababarada
Is-maamul… mid ka mid ah qodobada daciifka ah ee inta badan taleefannada suuqa yaalla, iyadoon loo eegin astaanteeda, moodeelkeeda, nashqadeynteeda ama astaamo kale oo kasta. Tani waxay u muuqataa inay tahay dhibaato aan umuuqan inay ku dhamaanayso muddada gaaban, maadaama aan sida caadiga ah ku aragno horumar ballaaran qaybta xoogga, sawir qaadista -sida midka ku sameeyay G weyn Pixel 3- iyo kuwa kale, laakiin waa ku yar yihiin kan, waana mid si weyn loo amaanay, miyaanay ahayn inkasta oo waliba la dayacay.
Si kastaba ha noqotee, in kasta oo cilladaha iyo wax-soo-saarka yar ee waaxda batteriga, waxaa jira hawl ka socota Android oo la yiraahdo Badbaadinta bateriga ama Awood-kaydinta, kaas oo mas'uul ka ah badbaadinta isticmaalka baytariga. Marka xigta, waxaan sharraxaynaa waxa ay ka kooban tahay iyo sida loo kiciyo.
Battery Saver, ama qaabka keydinta awooda (eraybixinta waa isbadali kartaa iyadoo kuxiran sameynta, tusaalaha, nooca Android iyo lakabeynta aaladda taleefanka) waxay ka kooban tahay yareynta howlaha uu processor-ku si caadi ah u fuliyo, iyo sidoo kale shaqooyinka kale.
1 Muxuu Yahay Habka Battery Saver
2 Sida loo kiciyo Battery Saver-ka Android
Muxuu Yahay Habka Battery Saver
Marka muuqaalkan la hawlgeliyo, waxqabadka mobilada waa la dhimay, adeegyada juqraafiga, animations, iyo inta badan howlaha asalka. Sidoo kale qaababka sida gariirka iyo waqtiga app. Tani waxay siinaysaa daqiiqado ama saacado badan nolosha batteriga si ay u dhammeeyaan maalinteenna.
Xitaa sidaas, astaamaha shaqadan way kala duwanaan karaan waxay kuxirantahay qaabeynta soo saare kasta, iyo sidoo kale magaceeda, qaabeynta kala duwan ee la bixin karo iyo maamulkeeda.
Sida loo kiciyo Battery Saver-ka Android
Waxaan u soconaa qaabeynta o goobaha.
Kadib waxaan aadeynaa qeybta Qalabka.
Waan soo galnay Batariga.
Markaan halkaa tagno, waxaan raadineynaa oo aan dhaqaajineynaa qaabka Keydinta Tamarta iyo voila, xarunteenu waxay daryeeshaa inta hartay. Midabka baararka ayaa isu beddeli kara oranji, casaan ama midab kale.
Waxaa xusid mudan taas tillaabooyinkani waxyar bay is beddeli karaan iyagoo kuxiran arrimo kala duwan oo hore loo soo sheegay, sida taleefanka, sumadda, nooca Android-ka ah iyo lakabka qaabeynta. Sidaa si la mid ah, waxay la mid tahay ama sida badan telefoonnada kula shaqeeya nidaamka hawlgalka Android.
Dhinaca kale, annaguna waan ku barnaa sida aad ugu dhoofin karto liiskaaga liiska Spotify y sida loogu diro emayllada sirta ah ee Gmail-ka ah ee 'Android'.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Sida loo kiciyo habka Battery Saver ee Android iyo maxaa loogu talagalay